Soomaaliland oo Shuruudo ku xirtay Wadahadal ay la gasho Dawlada Federaalka Soomaaliya – AwKutub News
Soomaaliland oo Shuruudo ku xirtay Wadahadal ay la gasho Dawlada Federaalka Soomaaliya
By awkutubnews September 23, 2018
Leave a Comment on Soomaaliland oo Shuruudo ku xirtay Wadahadal ay la gasho Dawlada Federaalka Soomaaliya
Maamulka Somaliland ayaa ka jawaabay hadal maalin kahor uu sheegay Ra’iisul Wasaare Ku Xigeenka Dowladda Federaalka Soomaaliya, kaasoo ahaa in Dowladda Soomaaliya dib u bilaabi doonto wada xaajoodkii kala dhexeeyey Maamulka Somaliland.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Maamulka Somaliland Sacad Cali Shire, ayaa shir jaraa’id oo magaalada Hargeysa uu ku qabtay ka sheegay inay soo dhoweynayaan in lasii ambaqaado dadaalladii nabadda, balse ay jiraan shuruudo badan oo taas ka horreeya.
Sacad ayaa xusay in Dowladda Dhexe iyo Somaliland xilligan yeelan karin wadaxaajood labadooda oo qura dhex mara, maadaama Dowladda Federaalku u aqoonsanayn Somaliland inay tahay dal madax bannaan.
Hadalka Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Somaliland ayaa imaanaya maalin kaddib markii uu Ra’iisul Wasaare Ku Xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamad Guuleed sheegay in Dowladda Dhexe iyo Maamulka Somaliland si toos ah uga arrinsan doonaan xal u helista khilaafaadka jira iyo waxyaabaha ay labada dhinac kala tabanayaan.
Wada hadallada Dowladda Dhexe iyo Maamulka Somaliland ayaa soo bilowday sannadkii 2012, iyadoo horay labada dhinac shirar ugu soo yeesheen dalalka Ingiriiska iyo Turkiga.
Bishii March ee lasoo dhaafay, waxaa baaqday kulan qorshuhu ahaa inay isugu yimaadaan Madaxweynaha Soomaaliya Maxamad Cabdullaahi Farmaajio iyo Madaxweynaha Maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi.
Tags: Soomaaliland Soomaaliya Wararka
Previous Entry ​Madaxweyne Mustafe cagjar oo ka hadlay saamiga ay Itoobiya shidaalka ka siisay DDS
Next Entry Daawo : Madaxweynihii hore Sheekh Shariif oo ka hadlay dilalka ka dhaca Muqdisho